Qabiilka oo Saameyn Ku Yeeshay Siyaaradii Awliyada Soomaalida, Kuwa Caalamiga Ahna Uusan Wax Saameyn Ah ku Yeelan |
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, January 8, 2019
1990kii ka hor, haddii aad Soomaaliya ku noolaan jirtay, waxaa jiri jiray Awliyo dalka laga wada yaqaannay, oo wakhtigoodii ugu badnaa u soo huray faafinta diinta islaamka. Culimadaas Awliya Alle ahaa, kolkii ay geeriyoodeen, ummaddu si wada jir ah ayey xus duco iyo barako ah ugu dhigi jireen. Waayadaas, waxaa la arki jiray, marka la gaaro xilliga siyaarada, dad badan oo oo kala yimaada dhammaan daafaha Soomaaliya, oo isugu yimaada qabriga weligaas la siyaaranayo. Awliyada aannu xiriirka la lahayn ee waddamada kale, iyagu, intii isku meel deggan ba, deegaankooda ayey ku xusi jireen, maadaama aysan qabuurtoodu ku oollin dalka dhexdiisa.
Wixii ka dambeeyey 1990kii, xaalkii waddanku waa is beddelay. Dagaallo iyo colaado sokeeye ayaa waddankii kala xiray. Qolo walbana waxa ay ku khasbanaatay in ay deegaankeeda ku siyaarato Awliyadaas – kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ah ba.
Laakiin, wixii ka dambeeyey 1996kii, dagaalkii sokeeye meelo fool xun ayuu gaaray, taas oo keentay in Awlayadii Soomaaliyeed la barto qolyooyinka ay ku abtirsadaan. Kolkaas baa haddii uu weligu ka soo jeedo laba qabiil oo ay colaadi dhex martay midkood, deegaankaas siyaaradiisa laga joojiyaa. Sidaas darteed, qabiillo badan ayaa joojiyey siyaarada culimo badan oo ka soo jeeda qabiillo aysan isku wanaagsanayn.
Maadaama siyaarada culimada wanaag iyo barako loo arko, hadda qabiil walba sheekh ay isku heyb yihiin oo dhintay, haddii uu jiro, isaga ayey siyaartaan, haddii uusan jirinna, odaayasha qabiilku uu ka soo farcamay ayey xusaan.
Siyaartii Awliyada caalamiga ah, iyadu qabiilku saameyn kuma yeelan, oo sidii loo siyaaran jiray ayaa meel walba oo Soomaaliya ka mid ah xilligeedii loogu qabtaa.
Tags: Kuwa Caalamiga Ahna Uusan Wax Saameyn Ah ku YeelanQabiilka oo Saameyn Ku Yeeshay Siyaaradii Awliyada Soomaalida
Next post Maxaa Kala Haysta Jaraa'idyada Kasoo Baxa Dubai Iyo Maqaayadaha Soomaaliya? - Arin la yaab leh!
Previous post MACALLIN JAAMACADDII WAAN DHAMMEEYEY - Gabadhii shaxda yaabka leh u degtay macallinkeedii